Imixholo ye-Twitter eyakho Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Iqonga le-Twitter lilandelela uMsebenzisi wento Iifayile ozifundileyo, phendula kwaye uphinde ubhale kwakhona; Ngayo, ibeka izihloko zomdla wakho kwaye yenze uphando ukuze ikunike ii-tweets ezahlukeneyo zolwazi lwakho kunye nolonwabo.
I-Twitter ikwajonga ukungqinelana nezinye izihloko, ezinokuba nomdla kuMsebenzisi, ngokweProfayile yabo kunye nemisebenzi abayenzayo kwilizwe labo lokwenyani. Kungenxa yoko le nto uMsebenzisi efumana iiTweets ezininzi kukhenketho lwakhe lwenethiwekhi.
Ukunceda iTwitter kulo msebenzi, uMsebenzisi kufuneka aqwalasele imiyalezo enemiyalelo yokulandela izihloko ezahlukeneyo kwimenyu yeprofayile yabo, kwi ixesha lokuqala nakwiziphumo zophando.
Ukukhethwa kwezihloko ezenzelwe i-Twitter kuwe
I-Twitter ikhetha ifayile ye- Imixholo yomsebenzisi kuthathelwa ingqalelo umthamo kunye nenqanaba leencoko ezihamba kwinethiwekhi. Xa kuziwa kumthamo, iTwitter ijonge inani labasebenzisi abathumela i-tweet, baphinde baphendule, baphendule okanye bayithande.
Umdla we-Twitter kukuba Izihloko zibonisa iincoko ezihlala zihleli yenziwe ngabasebenzisi ngokunxulumene neziganeko, abantu nezinto. Iqonga le-Twitter lisebenzisa ikhompyuter yokufunda ukufumana iiTweets ezinxulumene nale ngxoxo.
Kuphando lwayo, inethiwekhi yoluntu iTwitter izama ukufumana ifayile ye- I tweets ezinomdla kakhulu yaBasebenzisi, basebenzisa ii-algorithms, amagama aphambili kunye nezinye izikhombisi; Ukuze wandise iingxoxo ze-Twitter.
IMIBANDELA OYILANDELAYO KWI-TWITTER ZISEKHAYA
Kwiprofayili epheleleyo yoMsebenzisi izihloko azilandelayo ziyajongwa. Bonke ababalisi bamabali be-Twitter baya kuba nakho ukubona ifayile ye- Imixholo yomsebenzisiNgaphandle kokuba ukhusele iiTweets zakho kwaye ngabalandeli bakho kuphela abaya kuba nakho ukuzibona.
Umsebenzisi we-Twitter unokukhetha kwiqonga ukuya khusela iiTweets zakho; Ngesi sizathu, kuya kufuneka ucofe kwi-More iinketho icon, cofa kwindawo yabucala kunye nezokhuseleko kwaye ucofe ku Khusela iiTweets zakho.
Ukongeza, iqonga le-Twitter liphumeze ukhuseleko ezahlukeneyo ukunceda ukugcina iincoko zibandakanyiwe kwimixholo efanelekileyo kwaye ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuxhatshazwa. I-Twitter nayo isebenza ukugcina uMsebenzisi ehlaziywa.
I-Twitter yahlulahlula iAkhawunti yakho kwizinto ezithile onomdla kuzo
Iqonga le-Twitter libonelela uMsebenzisi ukhetho lwe ukukhubaza ezinye zezinto onomdla kuzo. Ngale ndlela, kuya kufuneka ucofe umdla kwi-Twitter kwaye ucofe idatha yakho ye-Twitter. Umsebenzisi kufuneka akhumbule ukuba umphumo wolu tshintsho kwinkqubo luhlala ixesha elithile.
I-Twitter ayisebenzisi umxholo ukwenza ukuba i amava omsebenzisi kwinethiwekhi, kwaye ayicebisi ukuba uyilandele kwixesha elizayo; Kodwa, ukuba uthatha isigqibo, unokukhangela ngokuthe ngqo. I-Twitter ihlala isenza iiMixholo emitsha ukonwaba kwaBasebenzisi bayo.
Ngokufanayo, iqonga le-Twitter linomdla wokubandakanya Izihloko ezidibeneyo kwimicimbi entsonkothileyo kunye nemidla, ngombono wokubonelela uMsebenzisi ngezona Tweets zinomtsalane nezivelisayo ukwenza uhambo lwabo lwenethiwekhi lube lolonwabisayo.
1 Ukukhethwa kwezihloko ezenzelwe i-Twitter kuwe
2 IMIBANDELA OYILANDELAYO KWI-TWITTER ZISEKHAYA
3 I-Twitter yahlulahlula iAkhawunti yakho kwizinto ezithile onomdla kuzo
Ulandela njani esinye isihloko kwi-Twitter?